မရေရာသောအချိန်တွင် သတိရရမည့် အချက် (၄) ချက် | Rev.U Min Lwin
မရေရာသောအချိန်တွင် သတိရရမည့် အချက် (၄) ချက်
Posted by ဦးမင်းလွင် on 28/04/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ကြယ္ကာ, မစ, မ်က္ေမွာက္ေတာ္, ယာကုတ္.	2 Comments
လွန်ခဲ့သော (၁၅) နှစ်ခန့် ကျွန်တော်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခဲ့သဖြင့် မိသားစုနှင့် အဆွေအမျိုးများမှ ကျွန်တော့်ကို အိမ်မှ နှင်ချ လိုက်ပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော့်အတွက် ကြီးမားသော ပြဿနာ အခက်အခဲ ရှိခဲ့သည်မှာ နေရေးထိုင်ရေး နှင့် စားရေး သောက်ရေး လိုအပ်ချက် များအတွက် လမ်းဘေး တစ်နေရာတွင် ငိုကြွေး ခဲ့ရပါသည်။ လမ်းစ ပျောက်နေသလို ခံစား နေရပါသည်။ ဘယ်သွားလို့ ဘယ်လာရ မှန်းမသိ။ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင် ရမှန်းမသိ၊ ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည် လက်ခံစ ဖြစ်သောကြောင့် အသက်တာကလည်း မရင့်ကျက်သေး သောကြောင့် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ နေရုံမျှအပ ဘာမျှ မတတ်နိုင်။ မိမိကိုယ်မိမိ ခရစ်တော်ကို လက်ခံမိသည်မှာ မှားနေပြီလား ဟု သံသယပင် ရှိလာ ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်ကို ခရစ်တော်နှင့် မိတ်ဆက်ပေး ခဲ့သော ကချင် မိခင်ကြီး တစ်ဦးက နှုတ်ခပတ်တော်နှင့် ခွန်အားပေး နှစ်သိမ့်ခဲ့သဖြင့် စိတ် သက်သာရာ ရခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ကာ ခရစ်တော်နောက် တစ်စိုက် မတ်မတ် လိုက်ခဲ့သည်မှာ ယခု အချိန်ထိ အောင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ကာလများ အတွင်း ပြဿနာ အခက်အခဲများ ရှိခဲ့သော်လည်း နှုတ်ခပတ်တော် ဖြင့် အသက်တာကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
ယာကုတ်သည် အိမ်မှု ထွက်လာပြီးနောက် မရေရာသော အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်ခံစားနေရပါသည်။ ယခုအခါ သူသည် ဘာမျှ မသေချာ၊ မရေရာ ဖြစ်နေပါသည်။ ဇနီး တစ်ယောက် ရဘို့လည်း မသေချာ၊ အလုပ်ရ ဘို့လည်း မသေချာ၊ နေစရာလည်း မသေချာ၊ အိပ်စရာပင် မရှိဖြစ်နေသော အချိန်သို့ ရောက်နေပါသည်။ အထီးကျန် ဘဝကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ အိမ်ထဲတွင် မိခင်နှင့် နေခဲ့ရသူမို့ စာသောက်စရာဘို့ မုဆိုးလုပ်ရန်ပင် အတတ် ပညာမရှိ သောကြောင့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ယာကုတ်သည် မသေချာ မရေရာ ဖြစ်နေပါသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ထံမှ သေချာမှုနှင့် ခွန်အားပေးမှု အမှန်တကယ် ရမှ ဖြစ်ပေတော့မည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ယာကုတ်ကို ပစ်ပယ်မထားပါ။ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်နှင့် ဂရုဏာတော် သည်ကား ဘုရားသခင်ကို မျှော်လင့်နေသော သူတိုင်းအတွက် ကြီးမားသော တန်ခိုးတော်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
ကျွန်တော် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ယာကုတ်သည်လည်း တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးကြောင်း နှုတ်ခပတ်တော်က ဖော်ပြထား ပါသည်။
ယာကုပ်သည် ဗေရရှေဘရွာမှထွက်၍၊ ခါရန်ပြည်သို့ခရီးသွားစဉ်တွင်၊ တစုံတခုသောအရပ်သို့ ရောက်၍၊ မိုဃ်းချုပ်သောကြောင့်၊ ညဥ့်ကိုလွန်စေမည် အကြံရှိသည်နှင့်၊ ထိုအရပ်၌ ကျောက်ကိုယူ၍ ခေါင်းအုံးဘို့ထားပြီးလျှင် အိပ်လေ၏။ ၁၂မြင်ရသောအိပ်မက်ဟူမူကား၊ မြေကြီးပေါ်၌ လှေခါးထောင်လျက် အဖျားသည် မိုဃ်းကောင်းကင် တိုင်အောင် မှီ၏။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တို့သည်၊ ထိုလှေခါးဖြင့် ဆင်းလျက်တက်လျက် ရှိကြ၏။ (ကမ္ဘာ ၂၈း၁၀-၁၂)
ယာကုတ်သည် မိုင် ၄၅၀ ခန့် သွားရမည့် ဟာရန်မြို့ ခရီးစဉ်တွင် မိုင် (၇၀) ခန့် သွားပြီးသောအခါ၊ နေရာ တစ်ခုသို့ ရောက်သော် အနားယူရန် လိုအပ် လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေရာ တစ်ခုတွင် စခန်းချကာ အနား ယူလိုက်သည်။ ထိုနေရာမှာ မှတ်သား ထားရန်ပင် ထိုက်တန်သော နေရာ တစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုအချိန်အထိ နာမည်ပင် မရှိသေး သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းလည်း မည်သူမျှ မသိကြပါ။ ထိုနေရာသည် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားသော နေရာတစ်ခုလည်း မဖြစ်ခဲ့ချေ။ သာမာန် ကျောက်တုံးများနှင့် ပြည့်နေသော နေရာတစ်ခု သို့မဟုတ် သစ်ရွက်ခြောက်များဖြင့် ရှိနေသော နေရာ တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ယာကုတ်သည် ထိုနေရာတွင် ဘာမျှ မျှော်လင့် ထားလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ ထို့နောက် ကျောက်ခဲ တစ်လုံးကို ယူပြီးနောက် ခေါင်းအုံးကာ အိပ်လိုက်ပါသည်။ ထို့အချိန်တွင် ယာကုတ်ထံသို့ ဘုရားသခင်က အိပ်မက် ထဲတွင် လာရောက် ဆက်သွယ် ပါလေတော့သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လူများထံသို့ မမျှော်လင့်သော အချိန်၊ မမျှော်လင့်သော နေရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ဖေါ်ပြတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရေချိုး နေစဉ်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို၊ ကားမောင်း နေသည့်အချိန်တွင် (သို့) ထမင်း၊ ဟင်း ချက်နေသည့်အချိန် လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် နေရာတိုင်းတွင် ရှိသော ဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာတွင် ထူးခြားသော အရှင်ဖြစ် သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်သည့် အခါတိုင်း ထူးခြားမှုများဖြင့် ဆက်သွယ်မှု ပြုသည် ဆိုသည်ကို သိထားရမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံတွင် လူတို့ကို အထူးဖေါ် ပြရန်အတွက် ဘုရားကျောင်း တွင်သာ လာရောက် ဆက်သွယ်မှု ပြုမည် မဟုတ်ပေ။ နေရာတိုင်း တွင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယာကုတ် အတွက် လမ်းဘေးတွင် အိပ်စက် မှုပြုနေချိန်တွင် အိပ်မက်ထဲမှာ လာရောက် ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။
အိပ်မက်ထဲတွင် ယာကုတ်မြင်မက်သည်မှာ မြေပြင်မှ လှေကား တစ်ခုသည် ကောင်းကင်သို့တိုင်အောင် ထောင်ထားလျှက် ကောင်းကင်တမန်တို့သည် တက်လိုက် ဆင်းလိုက် ရှိနေသည်ကို မြင်တွေ့ရလေသည်။ ထိုလှေကား၏ ထိပ်တွင် ဘုရားသခင် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ယာကုတ်သည် ထိုအိပ်မက်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ချက်ခြင်း နားခြင်းနားလည်လိုက်သည်မှာ ထိုနေရာသည် ဘုရားသခင်ကို ဆက်သွယ် ရမည့် နေရာဖြစ်ကြောင်း ချက်ခြင်း သိရှိ လိုက်လေသည်။ အိပ်မက်၏ အဓိက အချက်မှာ ယာကုတ်သည် မိမိကိုယ်မိမိ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တွင် ရှိနေကြောင်း မသိသည့် အချိန်တွင် ဘုရားသခင်က ယာကုတ်ကို အသိအမှတ်ပြုနေကြောင်းကို (က ၂၈း၁၆) အရ သိလိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အများစုသည်လည်း ယာကုတ်ကဲ့သို့ ထူးခြားသည့် အိပ်မက်မျိုး မရှိနိုင် သော်လည်း နှုတ်ခပတ်တော် သမ္မာတရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အားနည်း နေသည့်အချိန်များတွင် ဆက်သွယ်မှု ပြုလျှက် ရှိနေပါသည်။
ထိုအခြေအနေမှ ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူနိုင်သည့် ဝိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာများ ရှိနေပါသည်။ ပထမ အချက်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်သည် မမျှော်လင့် သည့်အချိန်နှင့် မမျှော်လင့်သည့် နေရာများတါင် ကျွန်ုပ်တို့ကို တခါ တစ်ရံတွင် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။ ဒုတိယ အချက်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝိညာဉ် ရေးရာတွင် အားနည်း နိုးကြားမှု မရှိသော အချိန်များတွင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော် ထဲတွင် ရှိနေကြောင်း သိထားရပါမည်။
ထာဝရဘုရားသည် လှေခါးထက်၌ ရပ်တော်မူလျက်၊ ငါသည် သင်၏အဘ အာဗြဟံ၏ ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ ဘုရား တည်း ဟူသော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ သင်အိပ်သောမြေကို သင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွှယ်အား ငါပေးမည်။ သင်၏ အမျိုးအနွှယ်သည် မြေမှုန့်ကဲ့သို့ များပြားလိမ့်မည်။ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်၊ လေးမျက်နှာ အရပ်တို့သို့ နှံ့ပြားကြလိမ့်မည်။ သင်နှင့် သင်၏ အမျိုးအနွှယ်အားဖြင့် လူမျိုး အပေါင်းတို့သည် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်။ ငါသည် သင့်ဘက် မှာရှိ၏။ သင်သွား လေရာရာ၌ ငါစောင့်မမည်။ ဤပြည်သို့ တဖန် ဆောင်ခဲ့ဦး မည်။ ဂတိထားသည် အတိုင်း မပြည့်စုံမှီ၊ သင့်ကို ငါမစွန့် ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (က ၂၈း၁၃-၁၅)
အထက်ပါ အတိုင်း အရှင်ထာဝရဘုရားသည် ယာကုတ်ကို စကားပြောခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မသေချာ မရေရာသော အချိန်များတွင် ထိုစကားထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင်ယူစရာ အချက် (၄) ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။
မထမအချက် (သတိရနေရမည့် ကတိတော်)
ပထမ အချက်နေဖြင့် ဘုရားသခင်က ယာကုတ်၏ ဘိုးဘေးများကို ထားရှိခဲ့သော ကတိတော်ကို ပြန်လည် ဖေါ်ပြခဲ့ ပါသည်။ ဘုရားသခင်က အဓိက ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အရာမှာ “မင်းရဲ့ ဘိုးဘေးတွေဖြစ်တဲ့ အာဗြဟံနဲ့ ဣဇတ်တို့နဲ့ ငါပြုထားတဲ့ ကတိတော်တွေ ရှိပါတယ်။ အခုမင်းအိပ်နေတဲ့ နေရာမြေကြီးကို ငါပေးမယ်လို့ ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးဟာ မင်းနဲ့ မင်းအမျိုး အနွယ်တွေအားဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖြစ်စေဘို့ ငါ ကတိပြုထားပါတယ်။ အဲဒီအရာကို ငါ အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဘုရားသခင်က ယာကုတ်ကို ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ ဤနေရာတွင် ယာကုတ် အတွက် အမှန်တကယ် ခွန်အားဖြစ်စေနိုင်သည့် စကားလုံးများကို ဘုရားသခင်က ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ သူသည် ယခုအခါ ကတိတော်မြေကို စွန့်ခွာကာ အဝေးသို့ သွားရတော့မည်။ ဘယ်အချိန်တွင် ပြန်လာရမည်ကို သူအမှန်တကယ်မသိ။ ယာကုတ်တွင် မျိုးဆက်လည်း ယခုအချိန်အထိ လုံးဝမရှိသေး။ သို့သော် ဤပြည်သို့ တစ်ဖန်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ သင်၏ အမျိုး အနွယ် စသည့် စကားလုံးများသည် ယာကုတ်ကို အမှန်တကယ် ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
မရေရာသော မိမိအသက်တာ၏ အချိန်များတွင် ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များကို အောက်မေ့ပါ။
ဤနေရာတွင် ယာကုတ်တစ်ဦးတည်ကိုသာ ပြောဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပင် ခွန်အားယူစရာ ရှိနေပါသည်။ ကျွန်တော် တို့သည် ခက်ခဲသောအချိန် မရေရာသောအချိန်ျများကို ရင်ဆိုကြုံတွေ့ပါက သမ္မာ ကျမ်းစာမှ ဘုရားသခင်၏ ကတိတော်များကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ အကူအညီဖြင့် ဖေါ်ပြပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သင့်၏ အသက်တာလမ်းမှ စိုးရိမ်မှု၊ ပြဿနာ နှင့် အခက် အခဲ များကို ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ်တော်ဖြင့် သင့်ကို တည်ဆောက်၍ သင့်ကို အားဖြည့် ပေးပါလိမ့်မည်။
ဒုတိယအချက်ကို ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
၂။ ဒုတိယအချက် ( သတိရနေရမည့် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်)
ကျွန်ုပ်တို့ သိရမည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘဝတွင် မရေရာသော အခြေအနေနှင့် အကြောက်တရားများ ကြီးစိုးနေချိန်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိသော ဧမာနွေလ ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ ယာကုတ် ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုအရာကို သိဘို့လိုကြောင်း သတိရစေရန် မိန့်မြွတ် အသိပေးခဲ့ ပါသည်။ “ငါသည် သင့်ဘက်မှာရှိ၏” (က ၂၈း၁၅)။ ယခုအခါ ယာကုတ်သည် တစ်ဦးတည်း အထီးကျန်သကဲ့သို့ ခံစားနေရချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယာကုတ် ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘယ်သောအခါမျှ တစ်ဦးတည်း အထီးကျန် နေမည်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် အတူရှိနေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တွင် ကျွန်တော်တို့သည် အသက်ရှင်နေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။
ရှင်ဘုရင်ကြီး ဒါဝိတ်က ပြောခဲ့သည်မှာ “အကယ်၍ သေမင်း၏ အရိပ်လွှမ်းမိုးသော ချိုင့်ထဲ ရောက်သွားရသော်လည်း ဘေးအန္တရာယ်ကို မကြောက်ပါ။ အကြောင်းမူကား ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်နှင့် အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ လှံတံတော်နှင့် တောင်းဝှေးတော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ချမ်းသာစေပါ၏။” (ဆာလံ ၂၃း၎)
ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကလည်း သူ၏ တပည့်တော်များကို အားပေးခဲ့သည်မှာ “ငါသည် ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့် အတူရှိမည်။” (မဿဲ ၂၈း၂၀) ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဟေဗြဲ ၁၃း၅ တွင်လည်း “ငါသည် သင့်ကိုမစွန့်၊ အလျှင်းပစ်၍မထား” ဟု ဖေါ်ပြထားပြန်ပါသည်။ ယာကုတ်ကို အတူရှိမည်ဟု ပြောသကဲ့သို့ အထက်ပါ ကျမ်းစကားများ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ကို ပစ်ထားမည် မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြထား ပါသည်။ ထိုအရာသည် ကျွန်တော်တို့ကို အသက်တာထဲတွင် မုန်းတိုင်းမှ လွတ်မြောက်စေမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မရာ မသေချာသော အချိန်များတွင် မျက်မှောက်တော်တွင် ရှိနေသည် ဟူသောအသိက ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည် စိတ်ချမှုနှင့် ငြိမ်သက်မှုများကို ဆောင်ကျဉ်းပေးပါသည်။
ဥပမာ။ ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်၏ သားသမီးများမှာ မိုးကြိုးမုန်းတိုင်းများ ရှိသည့်အချိန်များတွင် အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြပါသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် မှောင်နက်မဲမဲ အချိန်နာရီများတွင် ကလေးများ အားကိုးသော ဖခင်ဖြစ်သူ ကျွန်တော်ရှိနေသည်ကို သူတို့သည် သိနေသဖြင့် အကြောက်တရား ကင်းမဲ့စွာ ပျော်ရွှင်နေလေ့ရှိကြပါသည်။ ထိုမှောင်နေသည့် အချိန်များတွင် “မကြောက်နဲ့၊ အဖေမင်းတို့နဲ့အတူ ရှိနေတယ်” ဟူသော အားပေးစကား များကြောင့် သူတို့ သည် စိုးရိမ်းမှု မရှိတော့ဘဲ၊ အကြောက်တရားမှ လွတ်မြောက်နေ ကြပါတော့သည်။ သူတို့သည် ကျွန်တော့်ကို အမှောင်ထဲတွင် မမြင်သော်လည်း အသိတရားထဲတွင် ကျွန်တော်ရှိကြောင်း သိနေကြသောကြောင့် စိုးရိမ်စိတ် မရှိကြတော့ပါ။
အလားတူပင် ကျွန်တော်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံရှင် အဖဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ထဲတွင် အသက်ရှင်နေသည် ဟူသော အသိတရားက ကျွန်တော်တို့ကို ခွန်အားဖြစ်စေပါသည်။
ယခုအခါ မရေရာသော အချိန်တွင် တတိယအချက်ကို ဆက်လက် ကြည့်ပါဦးမည်။
၃။ တတိယအချက် (သတိရနေရမည့် ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာခြင်း)
ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာခြင်းသည် ယာကုတ်နှင့် အတူ ရှိနေကြောင်း ဘုရားသခင်က ထပ်မံ အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (က ၂၈း၁၅) တွင် ထပ်မံ ပြောကြား ထားသည်မှာ သင်သွားလေရာရာ၌ ငါစောင့်မမည်။ (စောင့် ကြည့်မည်။) ဟု ထပ်မံပြောကြား ထားပါသည်။ အခြား စကားလုံးအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆို ကြည့်မည် ဆိုလျှင် ဤခရီး စဉ်တွင် “သင့်ကို ငါကွယ်ကာ စောင့်ကြည့်မည်” ဟု ရေးသား ထားပါသည်။ ဤအရာမှာ ယာကုတ်ကို လမ်းခရီးတွင် ဒုက္ခ တစ်စုံ တစ်ရာ အဆိုးများ လုံးဝ တွေရလိမ့် မည်မဟုတ် ဟု မဆိုလိုပါ။ အသီးအပွင့်များ ကြီးမား များပြားစွာ ခံစားရမည်ဟုလည်း မဆိုလိုပါ။ အကို ဧသော၏ ဘေးအန္တရာယ် မှလည်းကောင်း၊ သားရိုင်းဘေးမှ လည်းကောင်း၊ ဒါးပြ၏ ဘေးမှ လည်းကောင်း ကွယ်ကာမည် (သို့) စိတ်ပူ စရာမလိုပါ ဟု ပြောကြားထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ဘုရားသခင်မှ ထိုအရာများကို အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးမည်ဟု ပြောခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အလားတူပင် ကျွန်တော်တို့၏ အသက်တာထဲတွင် အကြမ်းဖက်မှု၊ ရောဂါ၊ ပြစ်မှုများနှင့် ဆိုသွမ်းသူတို့၏ ဘေးအန္တရာယ် အခက်အခဲ ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီဆိုပါက ဘုရားသခင်က အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။
မရောသောအချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမစခြင်း အပြည့်အဝ ရှိနေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် အခြားလူတစ်ဦးအားဖြင့် ဒုက္ခအခက်အခဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါဝေဒနာ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါ သည်။
ဤအခြေအနေကို နားလည်နိုင်ရန်မှာ ဘုရားသခင်၏ကွယ်ကာခြင်းကို ကျွန်တော်တို့၏ အသက်တာတွင် အပြည့်အဝ နားလည် သဘောပေါက် အသိအမှတ်ပြုဘို့ လိုပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ – ကျွန်တော်နှင့် မိသားစုသည် ခရီးတစ်ခု သွားသည် ဆိုပါစို့။ ထိုခရီးစဉ်တွင် သေနတ်သမား တစ်ဦးက လုပ်ကြံခဲ့သည်ဆိုပါက ကျွန်တော်တို့သည် ထိကောင်း ထိနိုင်ပါသည်။ ဆေးရုံလည်း ရောက်နိုင်ပါသည်။ လူတစ်ချို့ သေပင်သေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအရာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ကို ထင်ရှားစေနိုင်ပြီး အခြားတစ်ဘက်မှ ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကြီးများပင်လျှင် ဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ် အားနည်း နေချိန်တွင် သတိရနေရမည့် အခြား စတုတ္ထတစ်ချက်ကို ထပ်မံ ကြည့်ပါစို့
ယခု သတိရနေရမည့် အခြားတစ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်၏ ထောက်ပံ့ မစခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စတုတ္ထအချက် (သတိရနေရမည့် ဘုရားသခင်၏ မစခြင်း)
က ၂၈း၁၅ တွင် “သင့်ကို ငါစောင့်မမည်” ဟူသောအ အခြား အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုမှာ “လိုသမျှ ထောက်ပံ့ပေးမည်” ဟူသော အခြား အဓိပ္ပါယ် တစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပါသည်။ ဟေဗြဲစကားလုံးဖြင့် ပထမဦးဆုံး ထိုစကားလုံးကို အသုံးပြုသည့် နေရာမှာ ကမ္ဘာဦင်္း ၂း၁၅ ဖြစ်ပါသည်။ အာဒံကို အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကို “ပြုစု စောင့်ရှောက်ရန်” ဟူသော စကားလုံးကို အသုံးပြုပြီး အာဒံ ကို အေဒင်ဥယျာဉ်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ အလားတူ စကားလုံးဖြင့် ယခု ယာကုတ်ကိုလည်း ပြဿနာ ဒုက္ခတွေထဲက ကွယ် ကာမည်ဟူသော ရည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယာကုတ်က ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခု သွားရမည့် ခရီးစဉ်တွင် သူ့အတွက် လိုအပ်နေသော စားစရာ၊ သောက်စရာ နှင့် အဝတ်အထည်များကို ကိုယ်တော်ရှင်က အမှန်တကယ် မစမည်ဟု အပြည့်အဝ ယုံကြည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (အငယ် ၂၀ ကိုကြည့်ပါ။)
ဘုရားသခင်သည် သူရွေးကောက်သော လူမျိုးတော် အတွက် ကူညီမစမည်ဟူသော ကတိတော် ရှိနေပါသည်။ သခင် ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင် ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်အတွက် ထိုအရာများကို လိုအပ်လျက် ရှိကြောင်း သိထားပါသည်ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထိုအရှင်သည် ထိုအရာများကို မစမည် ဖြစ်သည်။
ဥပမာ။ ။လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်ခန့်က ကျွန်တော်၏ အမျိုးသမီးမှာ ချောင်းဆိုး ဖျားနာနေသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်ပြသရာ တီဘီ ရောဂါ ဖြစ်နေကြောင်း သိခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် တီဘီရောဂါမှာ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စရာ မလိုသော်လည်း ကျွန်တော်တို့ မိသားစုမှာ စားဝတ်နေရေး အလွန်ကျပ်တည်းသောကြောင့် ကြီးမားသော စိတ်ခံစားမှု ရရှိခဲ့ပြီး အမြဲတမ်း ကြေကွဲဝမ်းနည်းခဲ့ရပါသည်။ ထိုအရာအတွက် နေရက်တိုင်း ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားပြီး ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါသည်။ ငွေကြေး မပြည့်စုံသောကြောင့် နေ့ရက်အစဉ်တွင် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြင့် ကျော်ဖြတ်ကာ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ငိုးကြွေး ဆုတောင်း ခဲ့ရပါသည်။ များမကြာမီ ဆေးစစ်ချက် ထွက်ပေါ်လာသောအခါ ဆေးပင် မသောက် လိုက်ရတော့ဘဲ ပျောက်ကင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါသည်။ ဘယ်ဆရာဝန်၏ အစွမ်းအစမှ မဟုတ်။ အသက်ရှင် တော်မူသော ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော် ကြောင့်သာ ထိုကျေးဇူးကို ခံစားရသည် မဟုတ်ပါလော။
ကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိသောအချိန်၊ မရေရာသောအချိန်များတွင် အောက်ပါ အချက် လေးချက်ကို သတိရနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ မစခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ဘုရားသခင်အပေါ်တွင် ယာကုတ်၏ တုန့်ပြန်မှုကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ကမ္ဘာဦး ၂၈း၁၆-၂၂ ကို ဖတ်ပါ။
ယာကုပ်သည် အိပ်ပျော်ရာမှ နိုးလျင်၊ အကယ်စင်စစ် ထာဝရဘုရားသည် ဤအရပ်၌ ရှိတော်မူ၏။ ရှိတော်မူကြောင်းကို ငါမသိ။ ဤအရပ်ကား၊ အဘယ် မျှလောက် ကြောက်မက်ဘွယ် ဖြစ်သည်တကား။ ဤအရပ်ကား၊ အခြားမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုံဗိမာန်၊ ကောင်းကင်တံခါးဝ ဖြစ်သည်တကားဟု၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ ရောက်၍ဆို၏။
နံနက်စောစော ယာကုပ်သည်ထ၍၊ ခေါင်းအုံး သောကျောက်ကို ယူသဖြင့်၊ မှတ်တိုင်ဖြစ်စေလျှက် ထူထောင်ပြီးလျှင်၊ ကျောက်ထိပ်ဖျားအပေါ်၌ ဆီကိုလောင်းလေ၏။ ထိုအရပ်ကိုလည်း၊ ဗေသလအမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။ ထိုမြို့၏ အမည်ဟောင်းကား၊ ဥလံလုဇဟူသတည်း။ ထိုအခါ ယာကုပ်က၊ ဘုရားသခင်သည် ငါဘက်၌ ရှိလျက်၊ ငါယခုသွားရာလမ်းမှာ၊ ငါ့ကိုစောင့်မ၍ စားစရာအစား၊ ဝတ်စရာအဝတ်ကို ပေးသနား တော်မူလျှင်၎င်းး၊ ငါသည်တဖန် အဘ၏အိမ်သို့ ငြိမ်ဝပ် စွာပြန်ရောက်၍၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ဘုရားဖြစ်တော်မူလျှင်၎င်း၊ မှတ်တိုင် ပြု၍ ငါထူထောင်သော ဤကျောက် သည်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်ဖြစ်ရမည်။ ပေးသနား တော်မူသမျှတို့ကို ဆယ်ဘို့တဘို့ ပူဇော်ပါ မည်ဟူ၍ သစ္စာပြုလေ၏။ (ကမ္ဘာဦး ၂၈း၁၆-၂၂)
အခန်ငယ် ၁၆ ကို ဖတ်ရှုသောအခါ ယာကုတ်သည် ဘုရားသခင်နှင့် ထိတွေ့ရသော လက်ရှိအခြေအနေ အပေါ်တွင် ချက်ခြင်း တုန့်ပြန်မှု ပြုခဲ့သည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ချက်ခြင်းပင် ခေါင်းအုံးနေသော ကျောက်တုံးကို ယူပြီး အမှတ်အသားပြုကာ ချက်ခြင်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု ပြုခဲ့သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ တွေ့မြင်ရလေသည်။
အခန်းငယ် ၂၀-၂၂ သို့ရောက်လျှင် ချက်ခြင်းပင် အဓိဌာန်ပြုကာ ဘုရားနှင့် ထိတွေ့ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ကတိတော် အတိုင်း သူ့အပေါ်တွင် ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ချက်ခြင်းပင် ကိုယ်တော်၏ နောက်သို့ လိုက်ပါမည် ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ယာကုတ်ကဲ့သို့ အမြဲပင် တုန့်ပြန်သင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ဆက်ကပ်၍ မိမိအသက်တာကို အပ်နှံ အသက်ရှင်သင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်စီတိုင်းသည် မရေရာ မသေချာသည့် အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်နေရပါက အထက်ပါ အချက် (၄)ချက်သည် ကျွန်တော်တို့ကို ခွန်အားနှင့် ရစ်ပတ်လွှမ်းခြုံလျက် ရှိနေပါသည်။ မိတ်ဆွေ အားမငယ်ပါနှင့်။
ဘုရားသခင်၏ မစခြင်း တို့ကို မျှော်လင့် ယုံကြည် အားကိုးလျက် အသက်ရှင်ပါဟု တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက် ပါသည်။
← ထူးခြားစွာ ဆုတောင်းခဲ့သော ယာဗတ်
သမ္မာကျမ်းစာမှ အမည်များ →
2 comments on “မရေရာသောအချိန်တွင် သတိရရမည့် အချက် (၄) ချက်”
Mya Aye on 10/05/2013 at 5:46 PM said:
Thank you Saya…Let me share…your massage..Pl..
yourlover on 11/05/2013 at 7:17 PM said:
thank you so much saya i share ready your massage